Gịnị bụ abụ uri? | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Gịnị bụ abụ uri?
Nkọwa ma ọ bụ nkọwa eserese nke akụkọ akụkọ ọ bụla emeela ka m nwee ụfọdụ mmasị, ikekwe n'ihi na ọ dị mkpa iji kpoo ihe oyiyi a kapịrị ọnụ site na akwụkwọ ozi na-ebute ihe nnọchianya ozugbo.
Foto ndị na-esite na akwụkwọ, nka ndị mepere emepe nke akwụkwọ sitere n'ike mmụọ nsọ na, yana, abụ uri, ụdị nnwale nke eji plastik rụọ ọrụ karịrị mkpụrụedemede (ma ọ bụ nke ọzọ), na-enweta nsonaazụ dị ka otu dị ka ha enweghị njedebe. Chọrọ ịma gini bu ihe eji abu egwu ma chọpụta ụfọdụ ihe atụ?
1 Akụkụ abụ
2 Mmalite nke uri uto
2.1 Ihe ochie nke uri uri anya
2.2 Anya uri na Spain
3 Ofdị uri a na-ahụ anya
3.1 Poetbụ ihe eserese esere naanị ederede
3.2 Onye na agwakọta leta na eserese
3.3 Onye ji mkpụrụedemede ese (ọ bụ abụ uri ọhụụ ọhụụ, ebe ọ bụ na o sitere na oku eji akpọ oku)
3.4 Ikpokọta akwụkwọ ozi na agba
3.5 Jikọta akwụkwọ ozi na foto
3.6 Mee mkpokọta
3.7 Poetbụ ihu na vidiyo
4 Mbido nke uri uri: cyberpoetry
Ọdịnihu Ọ bụ usoro nka pụtara na mmalite nke narị afọ nke XNUMX na nke ahụ ga-ebu ụzọ bụrụ cubism, ụdị nke ndị omenkà na-anwụghị anwụ dịka Picasso ma ọ bụ Bracque bụ ndị ebumnobi ha bụ ịmaliteghachi akụkọ ntolite nke ụwa site na iji agba dị elu ma ọ bụ oge a bu ihe di nkpa nke onye na-acho uzo ohuru.
Nke a ajụkwa ugbu a metụtakwara ụzọ ichepụta abụ, na-akpata ihe a maara dị ka visual uri..
Na uri eserese ihe osise plastik, onyonyo ma ọ bụ ihe osise eserese na-akọwa abụ ahụ na ntụgharị, na-aghọ ngwakọ ngwakọ na, karịa ihe niile, na-ahụ ụzọ nke ọma. Ihe atụ nwere ike isi na a nhazi akọwapụtara n'amaokwu nke ihe odide gaa n'ihe onyonyo nke jiri aka ya kọwaa ebum n'uche uri a.
Na Spain ndị edemede mbu banyere ihu abu mere na narị afọ nke iri na asaa, na ihe atụ dịka Silent Romance to the Immaculate Design by Gerónimo González Velázquez. Uri a, ewebata dika akuko banyere ihe odide ederede nke so ya, obughi nani ime ka ogugu akwukwo karie, mana igbasa ya na klas ndi mmadu di iche mere ka o buru ihe omuma na ngwa ngwa.
Ọ bụ ezie na a gụrụ ihe atụ ndị ahụ n'afọ niile sochirinụ, n'ikpeazụ na narị afọ nke XNUMX ogige ndị dị n'ihu nke Futurism ma ọ bụ Cubism ga-ebute ihe atụ nke uri anya dị ka nke obodo mepere emepe nke Joan Brossa ma ọ bụ otu egwu egwu bụ Grupo Zaj, nke ndị mejupụtara, ndị na-agụ egwu na ndị na-ahụ ihe nkiri nọ na 60s soro egwu nke egwu ha na iji ihe ma ọ bụ arụmọrụ nke obere ihe nkiri.
Mgbe mbata nke narị afọ nke XNUMX na nkwado nke teknụzụ ọhụụ, abụ uri a ghọtakwara dị ka cyberpoetry ma ọ bụ ọbụna uri elektrọnik, nyere ọtụtụ ohere ọ na-enye na netwọkụ mmekọrịta yana, ọkachasị, n'etiti ndị na-ese ihe ma ọ bụ ndị na-ese ihe osise. N'ihi ya, nkà nke ngwa ngwa nke juru ebe niile taa achọtara otu n'ime ndị kachasị mma na abụ a "plastik", na-enye ohere na-enweghị njedebe.
Uri uri anya bu ibuo, eji egwuri egwu, kee ihe. Mmekọrịta dị iche n'etiti anya na mkpụrụedemede nke okwu abụọ ahụ na-agagharị ibe ha ruo mgbe ha nwetara nsonaazụ nke na-awụ akpata oyi mgbe ụfọdụ, ndị ọzọ na-akpachikwu anya na obere ụfọdụ. N'ezie, a bịa na nka, ọ dịghị onye nwere okwu ikpeazụ.
Mmalite nke uri uto
Agbanyeghị na ọ bụ na narị afọ nke iri abụọ (ọkachasị n’ihe dị ka afọ iri asaa gara aga) ka abụ a na-ahụ anya yiri ka ọ malitere ịmalite, eziokwu bụ na nke a esiteghị na ya. Ejiri ya otutu oge. N’ezie, anyị na-ekwu maka oge gboo, dịka 70 BC. Olee otú ọ pụrụ isi mee? Iji mee nke a, anyị ga-agagharị na Omuma Gris.
N'oge ahụ, ọ bụghị naanị ndị ukwu meriri. E nwere ndị edemede nke ọtụtụ ụdị na ụdị. Egwú ndị a na-ahụ anya bụkwa otu n'ime ha.
Iji nye ihe atụ, ị pụrụ ịhụ calligram «The egg». Ọ bụ Simmias nke Rhodes ọ bụkwa abụ a na-esotere njirimara ekike eserese. Mana ọ bụghị naanị nke anyị nwere ike izo aka. Ọzọ, ọ bụghị site na Gris ma site na France, bụ Rabelais (site na 1494 rue 1553) ya na abu ya bu "Sombrero".
Kedu ihe ndị abụ abụọ a na-eme? Ha choro imeputa uri nke eji kọwaa aha ya. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe banyere akwa, uri dum dị n'ime silhouette ahụ. Otu ihe ahụ na okpu, ma ọ bụ nwere ihe oyiyi ọ bụla ọzọ.
Ya mere, okwu, amaokwu, okwu… ihe ọ bụla egwuri iji mepụta ihe zuru oke na ọ nweghị ihe fọdụrụ na njedebe ikpeazụ. Mana o ghakwara inwe ezi uche, bụrụkwa uri a wuru nke ọma.
Ihe ochie nke uri uri anya
Dị ka anyị hụworo na mbụ, visual uri na-esite na calligrams. Nke a bụ ndabere na etu o siri bido n’ihe ị maara ugbu a. Ma ndị edemede bụkwa, n'ụzọ nke ha, bụ ndị ochie nke abụ a na-ahụ anya.
Dịka ọmụmaatụ, ndị edemede abụọ sitere na narị afọ nke XNUMX kwụpụtara, Guillaume Apollinaire, na Stéphane Mallarmé. A na-ahụta ha abụọ dị ka ndị nnọchianya nke oge a nke nnọchi anya oge ochie nke uri ọhụụ, ya bụ, nke calligrams. N'ezie, enwere ọrụ ya nke ị nwere ike ịhụla ọtụtụ mgbe wee chee na ha "dị ugbu a" mgbe ha dị afọ ole na ole. Ha bụ "Eiffel Tower" ma ọ bụ "Nwanyị Nwanyị Na okpu."
Anya uri na Spain
N'ihe banyere Spain, visual uri nwere ya heyday na 60s, oge nke ọtụtụ ndị edemede pụtara na ha ka nọ n'ọrụ taa, n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ha anwụọla. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile malitere n'ụdị edemede a dị ka ụdị nkwupụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nkatọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ihe ha chọrọ bụ ịdọrọ uche gaa n'usoro e guzobere na nke na-ezighi ezi.
Aha dị ka Ogige, Brossa, Fernando Millán, Antonio Gómez, Pablo del Barco, wdg. bụ ụfọdụ ihe atụ nke ndị na-ede uri na-ahụ anya bụ ndị chọrọ ịgbanwe ụwa site na ihe ndị ọzọ e kere eke nke na-abanyeghị na ntị, kamakwa site na anya.
Otutu n’ime ha ka na-aru oru, ndi ozo n’ejizi edemede a. A maara ọrụ Eduardo Scala, Yolanda Pérez Herraras ma ọ bụ J. Ricart. Enwere ezigbo ndepụta na netwọkụ mmekọrịta na-eme ka abụ uri na-aba ụba ebe ọ bụ na ọtụtụ onyonyo na ihe mejupụtara na-eme ihe bidoro ọtụtụ afọ gara aga site na calligrams webata.
Ofdị uri a na-ahụ anya
Abụ uri esighị abụ ihe pụrụ iche. Ọ nwere ụdị dị iche iche nke na-ekewa ya dịka ihe ndị a na-ahụ anya si dị. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịchọta ndị na-esonụ:
Poetbụ ihe eserese esere naanị ederede
N’okwu a, ejiri mara ya naanị iji mkpụrụ edemede mepụta ihe izizi, nke na-adọta uche ndị na - agụ ya, ma ọ bụ site n’ikesa mkpụrụedemede ahụ n’ụzọ ụfọdụ, ma ọ bụ site n’inye ndị ga - akwalite agba ha, wdg.
Onye na agwakọta leta na eserese
N'okwu a, ọ bụghị naanị okwu uri dị mkpa, mana onyonyo n'onwe ha, nke n'ọtụtụ ọnọdụ metụtara okwu ahụ. Iji maa atụ, e nwere onyogho nke ihe nchekwa echekwara okwu ahụ kewapụrụ n'ụzọ nke na ntụtụ ahụ na-ebu mkpụrụedemede "missable" na "Im" na-anọgide ebe a gbanyere ihe ahụ.
Onye ji mkpụrụedemede ese (ọ bụ abụ uri ọhụụ ọhụụ, ebe ọ bụ na o sitere na oku eji akpọ oku)
Ha bụ n'ezie ọkpụkpọ oku nke butere abụ uri. N’ezie, enweghị ọtụtụ ndị na-anwa ime ya n’ihi nsogbu ọ gụnyere, mana ọ ka na-arị elu, ọkachasị nke ndị odee ochie na ndị edemede dere.
Ikpokọta akwụkwọ ozi na agba
Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ụdị visual uri n'etiti oyiyi na okwu, ma kama iji foto, ọ bụ ihe osise na-abata na egwu, ma ọ bụ nke e kere kpọmkwem maka ihe a na-ahụ anya, ma ọ bụ jiri ihe ọzọ na-enye ya ụdị uri ahụ.
Jikọta akwụkwọ ozi na foto
Ọ dị iche n’ihe osise ma ọ bụ n’ise ihe n’ihi na a na-eji ihe osise eme ihe n’ezie, ọ bụghị ihe osise ma ọ bụ ihe osise ihe osise nke ihe ndị ahụ. N'ihi nke a, ha na-enwe ezi uche ma na-emetụta karịa mgbe ha na-enye onye na-agụ ya ma ọ bụ onye ọ bụla nke hụrụ ya ihe ọzọ na ihe ahụ ha nwere ike inwe n'ụlọ.
A collage bụ set nke foto na-etinye na a ụfọdụ ụzọ ike a mejupụtara. Tinyere okwu, enwere ike gbanwee ya n'ụdị uri a na-ahụ anya (ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a, a na-eji ya maka mgbasa ozi ma ọ bụ ebumnuche azụmahịa).
Poetbụ ihu na vidiyo
Ọ bụ usoro ọhụụ mana ọ na - eto eto, ọkachasị na netwọkụ mmekọrịta. Ọ dabeere na animation inye ndị ọzọ anọgidesi na aghụghọ.
Mbido nke uri uri: cyberpoetry
Otu dika eserese esitere na calligrams, nke a enyekwala uzo ohuru nke na-ele abu. Anyị na-ekwu maka cyberpoetry, otu ihe eji nke dijitalụ dijitalụ maka okike na mmepe. Ya mere, dịka ọmụmaatụ a na-eji hypertexts, animation, akụkụ atọ, wdg. na ọbụna ihe a na-ahụbeghị, ma na-adị adị, ojiji nke mebere eziokwu.
Ya mere, uri uri anya nwere ihe jikọrọ ya na ihe ngosi ma ọ bụ ihe osise karịa na akwụkwọ ebe ọ bụ na ederede n'onwe ya adịghị mkpa dị ka ihe ngosi dum.
Kedu ihe ị chere maka uri eserese?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Gịnị bụ abụ uri?
Poetbụ uri na-ahụ maka m abụghị ihe ọzọ karịa uri ... na uri maka m, ọ bụ nke nwere ikike ịkwaga ndị mmadụ na ndị na-amaghị ihe, nke na-akpali mmetụta uche na nkwenye na ihe ijuanya site na nghọta ya na-atọ ụtọ ...
Ihe a niile ghọrọ ihe atụ ...
Zaghachi toni prat
Poetdị abụ bụ "ihe mkpofu na-aga n'ihu", ọ bụ ihe dịka "Menmụ nwoke nwere ikpu" ma ọ bụ "ụmụ nwanyị nwere amụ." na ọbụghị naanị denaturalization nke uri site na -emepụta "amaokwu n'efu" ma na-eme ka ihe niile a na-agbapụta na akwụkwọ bụ uri, na-enwe mmetụta na n'ụdị amaokwu, mana ugbu a ha chọrọ iwepụ agwa nke ide, dika nke oma inwe mmekorita nke umuaka ayi, nmekorita nke ha na ndi ezin’ulo ya, njiri mara nka na eserese, ihe osise na abu, nke ndi komunizim napuru ha bu uri na ibu unyi ... nogide na otua, ndi ukwe abu. nke asụsụ Spanish ga-akpagharị n'ili ha oge ọ bụla ndị juri nke ndị na-ede uri na-eme onwe ha na-eme ememe na ụgwọ ọrụ nke ihe mkpofu nke edere ugbu a, n'ihi na ọ dịghị onye nwara ịsị na Eze ahụ gba ọtọoooooo! Ekele «poets»
Zaghachi Dino Tomasilli
Nke mbu, icho aka ndi ibe m n’edetu na onyonyo!
(Otu onye apụọla anyị aka otu, maka m na-agụ naanị Akwụkwọ Nsọ na Latin ndị ogbenye ...)
Nye ndị ọzọ, otu ụdị abụ uri m chere na ọ ga-agụkarị, na:
Blọọgụ. ọdịnaya weebụ. net
Daalụ!! (na ezigbo ihu na ihe ọjọọ, dị ka nke ahụ ...)
Zaghachi ka grunx
Ewubere onye edemede a na mmemme nke sitere na ya di omimi ma na-emeghachighachi ya ... ya mere ngbali iji tinye atumatu ohuru nke otutu obi ya di omimi bu ihe di nkpa.
tor avid ga - ahọrọ n’onye a kwekọrọ na ya dakọtara ịma jijiji nke ndụ ya gabigara.
Zaghachi Humberto Lisandro gianelloni
Dị akụkọ: Ihe dị iche iche nke akụkọ
6 ozi maka June na biographies, nwa, nwata, kediegwu ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme